HOOYO-WALAAL – Warsame Digital Media WDM. "GET USED TO FREE PRESS"
Ismail Warsame January 2, 2020 January 2, 2020 Uncategorized
Buuggani wuxu ku saabsan yahay gabar Soomaaliyeed, Muraayo Geelqaad, oo markay u qaxday dal ka mid ah wadamada Yurub sida kumayaal Soomaaliyeed ee iyada la mid ahi yeeleen, go’aansatay in ay walaalaheed iyada ka yar yar kasoo saarto dhibka dagaalka sokeeyee ee Soomaliya, oo yagana soo geliso dalka ay joogto. Dhaqanka iyo shuruucda adag ee socdaalka iyo qaxootinima wadamada Reer Galbeedku kuuma oggalo in aad keento caruur aadan dhalin or ama aad cadayn karto in aad adigu mas’uul ka tahay.
Muraayo waa inan dawr iyo labaatan jir ah, welina aan guursan. Muraayo markay ku guuleysatay in ay dalka keento walaalaheed Axmed Geelqaad iyo Maxamed Geelqaad, ayaa iyada nin Soomaaliyeed soo doonay. Markii lagu heshiiyey guurka Muraayo, ayaa loo baahday in reerka cusub laga diwaangeliyo hay’adaha dawladda ee arrintaani la xiriirto. Mar haday inantani tahay mid la qabo marka laga eego dhanka waraaqaheeda ay dalka ku joogto iyo caruurta walaalaheeda ee ay hooyada ugu qoranyihiin, waa suurtoo-wiweyday diwaangelinta guurka cusub. Halkaa ayaa waxa bilaabatay durba isqadkii qoys ee ugu horeeyey.
Muraayo Geelqaad, iyadoo hadba qiiq isku qarineysa, waxay bilowday dooda in Soomaalidu yihiin dad Muslim ah oo aan u baahnayn isti-waangelin habka gaalada. Waxay soo jeedisay in wadaad Soomaali ahi arrinta guurkeeda ku filanyahay.
Ninka soo doonay Muraayo Geelqaad waa ilbax garanaya in guurka si toolmoon loo habeeyo, mas’uulliyada reerka cusubna sifo shuruucda dalka waafaqsan lagu saleeyo. Muraayo arrinta wey ka warwareegtay,waayo kiiskii laamaha socdaalka dib hadii loogu noqon, beenteedii baa soo baxaysa, waxana suurtowda in sharcigeedii dalka ay ku joogtay la tirtiro. Haday iskudaydo in ay ku andacooto in ninkeedii hore xijaabtay, waxa laga rabaa Muraayo warqaddii dhimashada ninkeedii hore. Taana ma hayso.
Waxa intaa soo dhan ka daran, Muraayo waxay qarineysaa ceebta kashifmidoonta hadii ay sheegto in ay aabaheed ka dhigtay ninkeedii sida ugu qoran waraaqaheeda hay’addaha socdaalka iyo qaxootinimada ee dalka ay joogto.
Dhibkani Muraayo Geelqaad gaar uma aha. Waxa jira dad badan oo la mid ah, waa ka mid dhibaatooyin qoys ee qurbajoogta Soomaliyeed haysata.
Kusoo dhawaw akhriska buugga HOOYO-WALAAL
Previous LIVE AND LET LIVE IN 2020
Next “TELL ME A SINGLE MEMORABLE PROJECT OR ACHIEVEMENT BY FARMAAJO-KHAYRE ADMINISTRATION?”